Golaha Amaanka oo ka hadlay Xaaladda Syria iyo Xabad joojin – Radio Daljir
Febraayo 23, 2018 12:29 g 0
Golaha Ammaanka ayaa soo jeediyey Xabad Joojin Saddex Ceshe ah, kana bilaabaneysa Galinta dambe ee Jimcaha gudaha dalka Syria, si loogu gurmado dadka ku dhibaateysan Dalkaasi.
U qaabilsanaha Kuwait ee Qaramada Midoobe ayaa sheegay in Xaalado Bani aadamnimo ay ka jirto dalka Syria, waxa uuna u jeediyey Xubnaha golahaan ku jira in ay u istaagaan badbaadinta shacabka dhibaatada iyo Barakaca isku biirsaday.
Hadii ay dhaqan gasho Xabad joojinta, waxa qorshuhu uu yahay in Gurmad iyo Dawo la gaarsiiyo dadka kunool Gododka Dhulka Hoostiisa laga qoday, si ay ugu badbaadaan Duqeymaha aanan kala go’a laheyn, ee ka imaanaya dhinacyada badan ee isku haya Syria.
Dowladda Madaxweyne Bishaar, Ciidamada Ruushka, Kuwa Turkiga, Xoogagga Kurdiyiinta Syria iyo Jabhadaha Hubeysan ayaa loo jeediyey in ay qaataan Xabad joojinta, cidii aanan u hogaansaminna tallaabo laga qaadi doono.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Kuwait Sheekh Sabaax Khaalid Alxaamid Al-Sabaax ayaa sheegay in kaliya Magaalada dhacda Galbeedka Dimishiq ee Qowdah ay ku dhibaateysan yihiin shacab farabadan, halka kuwo kalana ay ku waxyeeloobeen duqeymo ku hoobtay Magaalada.
Saraakisha Uganda oo dalbaday in la tageero Kordhinta Ciidanka AMISOM